अमेरिका - ALinks
मेक्सिकोमा ११ पार्टी शहरहरू
नोभेम्बर 19, 2021 एन्टिका कुमारी मेक्सिको, के कुराहरू
यदि तपाईं समुद्र तट बिदा र मेक्सिको भन्दा पार्टीको लागि ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ उत्तम गन्तव्य हो। यहाँ मेक्सिको मा सबै भन्दा राम्रो पार्टी शहरहरु को एघार को सूची छ। यी शहरहरूबाट छनौट गर्नुहोस्, स्थानीयहरू र अन्यसँग पार्टी गर्नुहोस्
मेक्सिको को यात्रा गर्न चाहने जो कोहि मेक्सिको को लागी एक भिसा को लागी आवेदन गर्न को लागी तीन विकल्प छ। यी विकल्पहरु मा निर्भर गर्दछ: तपाइँको राहदानी, भिसाहरु कि तपाइँको पासपोर्ट मा छन्, र अन्ततः अन्य निवास अनुमति छ कि तपाइँ पकड। यदि तिमी
क्यानाडा भिसाका लागि कसरी आवेदन दिने?
नोभेम्बर 15, 2021 शुभम शर्मा क्यानाडा, भिसा
अमेरिकीहरू, मेक्सिकोहरू, र धेरै उच्च आय भएका देशहरूका अन्य मानिसहरू (तलको सूची हेर्नुहोस्) क्यानाडा भ्रमण गर्न भिसा आवश्यक पर्दैन; यसको सट्टा, तिनीहरूले एक इलेक्ट्रोनिक यात्रा प्राधिकरण (eTA) प्राप्त गर्नुपर्छ जुन अनलाइन प्राप्त गर्न सकिन्छ। अरू सबैलाई भिसा चाहिन्छ
Calgary मा राम्रो काम कसरी खोज्ने?
अक्टोबर 29, 2021 एन्टिका कुमारी क्यानाडा, जब
पश्चिम यात्रा गर्नुहोस्, युवा जागिर खोज्ने, र तपाईं लगभग निश्चित रूपमा क्यालगरीमा समाप्त हुनुहुनेछ। क्यालगरी क्यानाडामा सब भन्दा द्रुत बृद्धि हुने अर्थतन्त्रहरू मध्ये एक छ, र राम्रो कारणको साथ। 136,000 र 2010 को बीचमा 2018 शुद्ध नयाँ रोजगारीहरू थपिएका छन्, यो एक लाभ हो
भिसा मुक्त देश भेनेजुएला
अक्टोबर 25, 2021 शुभम शर्मा भेनेजुएला
गाइड पासपोर्ट रैंकिंग सूचकांक अनुसार, भेनेजुएला राहदानी हाल 44 औं स्थानमा छ। यसले भिसा बिना 128 देशहरूमा प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ। भिसा-मुक्त यात्रा र भिसा-अन-अराइभल भेनेजुएला पासपोर्ट धारकहरूलाई फिलिपिन्स जस्ता देशहरूमा उपलब्ध छन्,
मेक्सिको पर्यटक भिसा कसरी प्राप्त गर्ने?
अक्टोबर 22, 2021 शुभम शर्मा मेक्सिको, यात्रा, भिसा
मेक्सिको पर्यटक भिसा एक कागजात हो जसले विदेशी मानिसहरूलाई भिसा-आवश्यक देश भ्रमण गर्न अनुमति दिन्छ। मेक्सिकोमा पर्यटक भिसाहरू केवल पर्यटन, व्यापार, भ्रमणहरू, सांस्कृतिक/खेलकुद कार्यक्रमहरू, वा कुनै अन्य उद्देश्यका लागि मान्य छन् जुन तपाईंलाई आवश्यक पर्दैन।
123 ... 12 अर्को पोस्टहरू»